Broadway Musicals - Iray amin'ireo zavatra tokony hatao any New York | Vaovao momba ny dia
Zavatra tokony hatao any New York: Mandehana amin'ny mozika Broadway
New York dia iray amin'ireo toerana izay manana tolotra fizahan-tany malalaka. Izany no mahatonga ny safidy maro dia maro izay ilaintsika andro vitsivitsy hanatanterahana azy ireo. Anisan'izy rehetra, anio dia hijanona amin'ny iray amin'ireo atolotray indrindra ho an'ny mpihaino rehetra izahay: Mozika Broadway.
Azo antoka fa efa naheno an'izany ianao na angamba efa nisy. Na izany na tsy izany, io no iray amin'ireo zavatra lehibe tokony hatao any New York. Iray amin'ireo fotoana tsy hay hadinoina izay ho voarakitra ao amin'ny retina. Hankafy ity làlana ity koa izahay Times Square, handeha amin'ny farany amin'ny tantara an-tsehatra amin'ny endrika mozika na opera.
1 Dia an-tongotra namakivaky ny Broadway sy ny Times Square
2 Fa maninona no lasa zavatra tsy maintsy jerena ny mozika Broadway?
3 Ireo mozika manan-danja indrindra izay ho hitantsika
Dia an-tongotra namakivaky ny Broadway sy ny Times Square
Araka ny efa noresahintsika, Broadway dia làlana iray mamakivaky ny iray amin'ireo kianja malaza indrindra ao amin'ilay toerana: Times Square. Fizarana voalohany manomboka amin'ny lapan'ny tanàna ka hatrany amin'ny Bronx. Ka eo amin'ny lalany no amelany arabe maro ary koa lalan-kely maro. Fa marina fa amin'izy rehetra, Times Square no iray amin'ireo zava-dehibe indrindra. Fa inona no antony? Eny, satria io no faritra ifantohan'ny safidy fialam-boly marobe, miaraka amin'ny teatra mihoatra ny 40 izay ananantsika manodidina antsika. Toerana somary be olona foana, saingy mendrika ny ho hita.
Ao amin'ny kianja dia ho hitantsika ny jiro sy ny famantarana izay manintona antsika. Raha te hahita ny faritra kely ianao, alohan'ny hidirana amin'ny fampisehoana dia azonao atao izany amin'ny fahalalana ny teatra rehetra misy anelanelan'ny Avenue 6 sy ny Avenue 8th. Avy amin'ity faritra ity dia azonao atao ny miditra amin'ireo teatra manan-danja indrindra, izay ahafahanay manasongadina ny «Majestic» sy ny "Imperial".
Fa maninona no lasa zavatra tsy maintsy jerena ny mozika Broadway?
Isaky ny mandeha amin'ny toerana manokana isika, dia avelantsika hoentin'ny fadin-tseranana sy ny safidin'ny fizahan-tany atolotra antsika izy. Amin'ity tranga ity, tsy afaka ny ho ambany isika. Koa satria ampahany amin'ity faritra ity ny mozika Broadway, ny kolontsaina sy ny tantarany. Iray amin'ireo fampisehoana ireo fa tsy maintsy miaina indray mandeha amin'ny fiainanao ianao, farafaharatsiny. Satria izy io dia traikefa manankarena sy miavaka, tsy misy isalasalana. Ho fanampin'izay, maro amin'ireo anarana malaza sy tarehy amin'ny tontolon'ny fialamboly ihany koa no nanao fampisehoana vitsivitsy amin'ity toerana ity. Tsy mandeha lavitra, avy amin'i Groucho Marx, Audrey Hepburn na Robert Redford an'i James Dean, Marlo Brando na Grace Kelly ankoatry ny maro hafa.
Ireo mozika manan-danja indrindra izay ho hitantsika
Marina fa afaka miovaova be izy ireo ary ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Indraindray dia miova izy ireo, saingy misy ny sasany izay mihoatra ny tena ilaina. Raha ny marina, ny malaza indrindra dia 'The Lion King', 'Chicago' na 'The Phantom of the Opera'. Saingy tsy manadino anaram-boninahitra hafa toa ny 'Wicked', 'Les Miserables', 'Beauty and the Beast' na 'Mamma Mía'. Raha 'Aladdin' na 'Frozen', izy ireo koa dia iray amin'ireo malaza indrindra. Toa ireo manana lohahevitra Disney foana no maka ny toerana ambony. Na tianao ireo anaram-boninahitra voalaza ireo, na ny hafa izay mety ho hitanao eny amin'ny takelaka, dia tsara ny maka tapakila mialoha amin'ny pejy toy ny Hellotickets, tranokala amin'ny teny espaniola, ahafahanao mividy amin'ny euro sy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa eo an-toerana. Ny ankamaroan'ireny fiasa ireny dia mazàna mivarotra herinandro maro talohan'io, noho izany dia ampirisihinay tsy hiandry ny fividianana azy ireo any amin'ny biraon'ny boaty
Marina fa tsy tadidintsika foana na satria fanapahan-kevitra farany farany dia ny tsy fananantsika ny tapakila. Aza manahy, satria 'in situ' indray mandeha dia azonao atao ny mividy azy ireo. Raha te-hijery fampisehoana fotsiny ianao, saingy tsy manana filàna mialoha ho an'ny iray manokana, dia misy Fivarotana Times Square izay misy varotra tapakila amin'ny vidiny tena lafo, satria tsy seza akaikin'ny lampihazo izy ireo. Saingy araka ny lazaintsika dia safidy foana ny mandinika. Etsy ankilany, amin'ny teatra iray ihany dia hanana tapakila ihany koa izy ireo, ary amin'ny andro mitovy amin'ilay fampisehoana voalohany amin'ny maraina, dia manome fihenam-bidy ho an'ireo tonga voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Zavatra tokony hatao any New York: Mandehana amin'ny mozika Broadway
Inona no ho hita any Riga, Latvia